आधुनिक दन्त चिकित्सा को तरिका, मानव खानको परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ dentition align। तर यो सामान्यतया उपस्थिति मा एक महत्वपूर्ण सुधार गर्न नेतृत्व गर्दैन। र एक व्यक्ति चिबुक को संरचना मा कुनै पनि विकृति छ भने, यो orthognathic सर्जरी मद्दत गर्न सक्छ। यो खण्ड ओथडोटिस मात्र छैन malocclusion को सुधार संग गर्नुहुन्छ जो, तर सन्तुलन र अनुहार को सही अनुपात दुरुस्त राखेको छ। उदाहरणका लागि, चिउँडो वा mandible बढाव को आकार मा परिवर्तन कोष्ठक र अन्य Orthodontic संरचना को माध्यम द्वारा हासिल गर्न सकिन्छ। यो orthognathic सर्जरी उपस्थिति थप आकर्षक गर्न जान्छ। यो चिबुक मा अनुहार को एक गम्भीर विरूपण सच्याउनुहुन्छ।
orthognathic सर्जरी को इतिहास
दन्त चिकित्सा को यस शाखा कस्मेटिक चिकित्सा र maxillofacial सर्जरी जोडती। यसको उद्देश्य सुरिलो अनुहार सुविधाहरू प्राप्त छ। यो खण्ड को नाम अनुवाद कि ल्याटिन शब्द बाट लिइएको हो "सीधा चिबुक।" सुरुमा, यी अपरेसन मात्र सही खानको लागि बाहिर थिए, त्यही समयमा अनुहार को आकार अलिकति परिवर्तन भयो। को एक विशेष सुविधा तिनीहरूले मात्र तल्लो चिबुक प्रभावित थियो, र अनुहारहरू scars छाला थिए भनेर चीरा, बाहिर बाट बनेको छ।
तर आन्दोलन प्रविधी द्वारा 1965 मा विकास भएको थियो माथिल्लो चिबुक। कि पछि, orthognathic सर्जरी अनुहार को आकार परिवर्तन गर्न प्रभावकारी तरिका भएको छ। निरन्तर सञ्चालनको विधि सुधार, र तिनीहरूले चाँडै आन्तरिक कटौती मार्फत गरिनेछ। यो रोगी को उपस्थिति थप आकर्षक बनाउन दिनुभयो। हालैका वर्षहरूमा सुधार को विधि त्यो scars बाँकी थिएन अब पछि, थप आधुनिक भएको छ।
जहाँ राम्रो विकसित orthognathic सर्जरी
सर्जन लाटविया, सेन्ट पीटर्सबर्ग र मास्को यो प्रोफाइल मा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ। यस्तो अपरेसन रीगा nstitute दन्त चिकित्सा मा गर्न सकिन्छ। सेन्ट पीटर्सबर्ग, यस्तो सुधार प्रदर्शन कि केही चिकित्सा केन्द्र मा। सबैभन्दा चिरपरिचित विशेषज्ञ maxillofacial सर्जरी डा AR Andreischev छ।
मास्को मा orthognathic सर्जरी लागि विशेष गरी प्रसिद्ध। विशेषज्ञहरु अनुसन्धान र Otorhinolaryngology को चिकित्सकीय केन्द्र आफ्नै विकास रूपमा प्रयोग गरेर सबैभन्दा आधुनिक प्रविधी प्रयोग गरेर यी अपरेसन प्रदर्शन। यो पीएचडी, रूस मा सबै भन्दा राम्रो डाक्टर यस्तो प्रोफाइल ए एन Senyuk, आई Lyashev, एमए Mokhirev र डी एन Nazaryan।
तिनीहरू सबै एक समस्या समाधान - चिबुक कमजोरीहरू समाधान र अनुहार को उपस्थिति सुधार। तर त्यसको आधारमा व्यक्तिगत विशेषताहरु र प्रयोग फरक सञ्चालनका लागि रोग खुलारूपमा को डिग्री मा:
माथिल्लो चिबुक को osteotomy - आन्दोलन र टाइटेनियम प्लेट संग आफ्नो fixation;
तल्लो चिबुक को osteotomy - सही स्थिति मा सेट;
केही अवस्थामा यो वृद्धि गर्न धेरै भागमा विभाजित आवश्यक चिबुक छ;
सार्दा गालामा हड्डी ;
genioplasty - को चिउँडो र अनुहार औसत लाइनको सुधार को अतिरिक्त बन्द काटन;
कहिलेकाहीं यो थप rhinoplasty, Liposuction वा बोसो इंजेक्शन, lipofilling आवश्यक छ।
सर्जरी लागि सङ्केत गर्छ
सामान्यतया, साना विरूपण चिबुक malocclusion वा अनियमित dentition ब्रेसहरू, crowns, वा veneers मार्फत सही। तर तपाईं सफलता हासिल गर्न सक्छन् यसरी सबै अवस्थामा छैन। ब्रेसहरू अक्सर मदत छैन, वा, विपरीत मा, बिरामीको अवस्था worsen। यस्तो Orthodontic उपचार चिबुक को गंभीर deformations अन्तर्गत बाहिर छ भने, यो temporomandibular संयुक्त, वा को pathologies सक्छ दाँत को dislocation।
त्यहाँ मात्र आवश्यक जब यस्तो हस्तक्षेप अनुमति जो orthognathic सर्जरी लागि केही सङ्केत गर्छ, छन्। सामान्यतया यो यस्तो अवस्था हो:
को जबड़े को असामान्य आकार;
को जबड़े को विषमता;
रोगी धेरै सानो चिउँडो छ जसमा prognathic खानको;
कडा कम चिबुक projecting;
gingival वा asymmetric मुस्कान।
Ortognasticheskaya सर्जरी सबै छैन देखाउँछ। केही मानिसहरू गम्भीर विरूपण बिना यस्तो सञ्चालन पूरा गर्न इच्छुक छन्। को खानको सही छ, तर मानिसको मात्र उपस्थिति उहाँले मन छैन भने आफ्नो डाक्टर उपचार गर्न उतरदायित्व लिनु छैन। साथै, त्यहाँ यस्तो सञ्चालनका लागि केही contraindications हो:
बाल्यकाल र किशोरावस्था को जबड़े अन्तिम गठन अघि, लगभग 18-21 वर्ष छ;
को skeletal सिस्टम को विकृति;
को endocrine ग्रन्थीहरूको अवरोध;
के प्रशिक्षण आवश्यक छ
सञ्चालन एक दन्त चिकित्सक द्वारा एक पूर्ण परीक्षा undergo गर्न आवश्यक छ पहिले। डाक्टर को मानकहरु temporomandibular संयुक्त को उचित कार्यका लागि आवश्यक छ, यो fullest clamping जबड़े गर्न निर्धारण गर्नेछ। यो एक कम्प्युटर डल्फिन कार्यक्रम भनेर एक विशिष्ट व्यक्ति लागि सुरिलो अनुहार सुविधाहरू 3D-मोडेल निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ प्रयोग गर्दछ। त्यसपछि यो टेम्पलेट सञ्चालन समयमा प्रयोग गरिएको छ।
तर orthognathic उपचार मा embarking अघि, यो आवश्यक अलि dentition पंक्तिबद्ध छ। यो ब्रेसहरू वा पारदर्शी टोपी, कम्तिमा 2-3 महिना थकित हुनु पर्छ जसको लागि लागू हुन्छ। कहिलेकाहीं यो अवधि 1-1.5 वर्ष ढिलाइ भएको छ।
रूपमा सञ्चालन छ
Orthognathic सर्जरी - एक गम्भीर आक्रामक उपचार हो। त्यसैले, सबै सञ्चालन अस्पताल मा प्रदर्शन गर्दै छन्। सामान्य एनेस्थेसिया आवश्यक छ। सञ्चालन पछि 5-6 घण्टा जारी हुन सक्छ। आवश्यक चिकित्सा पर्यवेक्षण पछि, त्यसैले रोगी धेरै दिनको लागि अस्पताल मा रहन्छ। तर सामान्य गतिविधिहरु नगर्न उहाँलाई छोडेर पछि। तसर्थ, माथि3सप्ताह लागि अस्पताल दिइएको।
त्यहाँ जटिलताहरू हुन सक्छ
सामान्यतया यस्तो अपरेसन अधिकतम सजिलै सहन। यो सर्जरी पछि कठिनाइ हुन सक्छ - यो चाँडै नै बित्दै र पनि सकारात्मक प्रभाव छ जो ओठको numbness छ: रोगी दुखाइ महसुस गर्दैन। साथै, कहिलेकाहीँ त्यहाँ नरम तन्तु सुनिंनु, दुखेको घाँटी, भाषण विकार, नाक भीड, अलि कति वाकवाकी छ। सञ्चालन को र साइड इफेक्ट को अभाव मा सफलता को सुनिश्चित गर्न, यो एक राम्रो क्लिनिक र कुशल डाक्टर चयन गर्न आवश्यक छ।
साथै, सञ्चालन सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत गरिन्छ किनभने, अप्रिय परिणाम बच्न धेरै नियमहरू को उत्सव हुनेछ:
खाना वा सर्जरी गर्नु अघि कम्तिमा 8 घण्टा पिउन छैन;
यो अघि दिन धूम्रपान गर्न प्रयास;
को slightest indisposition, ज्वरो वा आंतों विकार मा सर्जरी गर्न छैन।
Ortognasticheskaya सर्जरी एक व्यक्तिको उपस्थिति परिवर्तन गर्न सक्षम छ। उसलाई जवान र थप आकर्षक हेर्न मद्दत गर्छ अनुहार सुधार। सौन्दर्य को मानक symmetrical अनुहार आकार छ किनभने यो आवश्यक छ। साथै, एक सुन्दर मुस्कान पनि, मान्छे आकर्षित गर्छ। को जबड़े को अनियमित आकार संग एक मानिस, बस लजालु मुस्कान अक्सर छ बंद र हराउछ आत्म-विश्वास।
फोटो को एक किसिम को लागि, तपाईं परिणाम प्रकारको orthognathic सर्जरी हासिल गर्न मद्दत गर्छ के देख्न सक्छौं। सञ्चालन अघि र पछि रोगी अक्सर एकदम फरक देखिन्छ। यो चिबुक लामो पार्नू, वा यसलाई छोटो, आफ्नो स्थिति, परिवर्तन गर्न चिउँडो को आकार र आकार परिवर्तन गर्न सक्षम छ। फलस्वरूप, अनुहार सुविधाहरू थप नियमित र उपस्थिति कायापलट हुन्छन्। सञ्चालन सकारात्मक प्रभाव सबै कटौती भित्रबाट छन् कि, त्यसैले बाहिरी कपडा को निष्ठा विचलित छैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ।
सौंदर्य परिणाम प्राप्त गर्न साथै, यो अपरेसन यस्तो बोलीको स्पष्टता को कमी, कार्य चबाने कठिनाई रूपमा कार्यात्मक विकार, निर्मूल गर्न मद्दत गर्छ। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ortognasticheskaya सर्जरी रोगी को मनोवैज्ञानिक राज्य सुधार र आफ्नो भरोसा बढ्छ।
यो सुधार को समीक्षा
वास्तवमा धेरै केही मानिसहरू के orthognathic सर्जरी थाहा छ। समीक्षा खानको सुधार को सबै भन्दा ब्रेसहरू को मद्दतले बाहिर छ भनेर देखाउँछ। केवल चिबुक मान्छे को गम्भीर deformations को मामला मा सर्जरी मा निर्णय गरे। तर यस्तो सेवा फाइदा लिए गर्नेहरूलाई आफ्नो उपस्थिति राम्रो लागि परिवर्तन भन्छन्। धेरै, बोली विकार र malocclusion देखि वर्षसम्म पीडित एक inferiority जटिल, सर्जरी पछि परिवर्तन भोगिरहेका। Orthognathic सर्जरी, पनि केही वर्ष rejuvenate मदत। र कुनै साइड इफेक्ट वा जटिलताहरू सर्जरी पछि, विरामीहरु नोटिस छैन।
Orthognathic सर्जरी - यो चिबुक को संरचना मा गम्भीर समस्या मा राम्रो देखिन्छ लागि के परिवर्तन हुनेछ छ। यस्तो सुधार सञ्चालन सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने आधुनिक तरिका।
कि, सबैले थाह करङहरु अन्तर्गत सही छ, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
सहायक चिकित्सा के छ?
किशोरहरु मा आदर्श के हो? नैदानिक परिणामहरूको माप र विश्लेषणको विशेषताहरू
श्वसन र ग्याँस विनिमय: जीवनको आधार
समारा गर्न मास्को देखि डबल-तल्ले रेल: भित्र रोक्न, फोटो, समीक्षा
दन्त प्रविधिले के गर्छ? यस क्षेत्रमा विशेषज्ञ कसरी बन्न सकिन्छ?
अभिनेत्री Anastasia Ivanova: एक जीवनी। यो श्रृंखला "Univer"
पदार्थ दुरुपयोग पदार्थ लागि मूत्र परीक्षण कसरी पारित गर्न?
दन्त रोग periodontitis को विवरण .. उपचार र रोकथाम